Bernardo Silva oo ka hadlay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo kooxda Real Madrid – Gool FM
Bernardo Silva oo ka hadlay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo kooxda Real Madrid
Dajiye January 22, 2019
(Manchester) 22 Jan 2019.Kubad sameeyaha reer Portugal ee Manchester City Bernardo Silva ayaa soo xiray wararka xanta ah ee lala xiiirinayo kooxda Real Madrid oo si aad ah u xiiseeneyso inay la saxiixato.
Bernardo Silva ayaa xaqiijiyay in uu si weyn ugu faraxsan yahay nolosha kooxda Manchester City uu hogaaminayo macalinka reer Spain ee Pep Guardiola.
Ciyaaryahanka reer Portugal Bernardo Silva oo 24 sanno jir ah, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay Manchester City islamarkaana uusan wax dood ah ka qabin in uu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Sky Blues, xili sheshiiskiisa haatan uu dhacayo sanada 2022.
“Weli waxaan heystaa seddex sano iyo bar ee ka harsan qandaraaskeyga Manchester City, wuxuu dhacayaa 2022, aad ayaan ugu faraxsanahay halkaan”.
“Hadii ay kooxda Manchester City dooneyso in aan sameeyo heshiis kordhin, ma jirto wax dood ah ee aan ka qabi doono, sababtoo ah waxaan doonayaa inaan halkan sii joogo oo aan si wada jir ah wax wanaagsan u qabano”.
Warbaahinta caalamka ayaa dhawaantan sheegtay in kooxda Real Madrid ay dooneyso inay lasoo saxiixato xidiga Manchester City Bernardo Silva suuqa xagaaga ee soo aadan.
DEG DEG: Tottenham oo Jabkii labaad la kulantay
XARFAAN CULUS oo Hal Koox wada Camirta......(Robinho, Adebayor, Turan, Ba iyo xitaa...)..+SAWIRRO